GCompris: suite yedzidzo yeiyo diki yeimba | Linux Vakapindwa muropa
GCompris isoftware suite yedzidzo Inotarisirwa padiki pane imba, kunyanya kune vana vari pakati pemakore maviri kusvika gumi ekuberekwa. Pakutanga yakanyorwa muC uye Python naBruno Coudoin muna 2. Izvozvi zvave kunyorwazve muC ++ neQML mushure memakore gumi nemanomwe ekuramba uchisimukira. Raibhurari dzeQt dzakatemerwa grafiki chimiro panzvimbo peGTK + sezvazvaishandiswa pakutanga, saka haina kungo shanduka muhunhu hunoshanda, asiwo maererano nemagadzirirwo ayo. Izvo zvisina kubvira zvachinja kuzvipira kwavo kuvhura sosi, kupihwa rezinesi pasi peGNU GPL, uyezve chishuwo chavo chedzidzo.
Iyo parizvino inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, senge GNU / Linux, uye zvakare ye macOS uye munguva pfupi yapfuura yeWindows. Vhezheni dzemapuratifomu enharembozha senge Android neIOS akatoitwa kuitira kuti vadiki vari mumba vagone kunakidzwa nawo pane nhare mbozha. Uye mitauro haizove dambudziko, nekuti pakutanga kwayo yakasikwa nerutsigiro rweFrench, asi nhasi yakashandurwa mumitauro inodarika makumi mashanu, kusanganisira Spanish.
Vadzidzisi, neGCompris mune chishandiso chechokwadi chekudzidza, chine zviitiko nemitambo inosvika zana nemakumi matatu yekuti vana vadzidze nenzira yakanakisa yavanoziva nayo: nekutamba. Pakati zvidzidzo kana zvinhu zvinogona kudzidzwa Iko kuwanikwa kwekushanda kwekombuta, nekudzidza nezve keyboard, mbeva uye nemasaini akasiyana, pamwe nemimwe misoro inoenda kubva kunhamba, sainzi, jogirafi, kuverenga, uye zvimwe.
Vakomana havazofinhwa nezvose izvi zviitiko, kunze kweku sanganisira mimwe mitambo yakazvimiririra senge chess, memory memory, ina akateedzana, sudokus, mapuzzle, kudhirowa, nezvimwe. Zvese zvaunoda kuti mwana wako azvinyudze mune yedhijitari nyika uye kudzidza uchinakidzwa neiyi inoshamisa chirongwa. Uye zvakare, iwe unenge uchitoziva iwo mazhinji edzidzo ekuparadzira aripo uye atakataura nezvazvo muLxA, pamwe nemamwe mapurogiramu mazhinji nemitambo yemavhidhiyo yakanangana nedzidzo yemazera akasiyana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » GCompris: suite yedzidzo kune idiki imba